ဘာသာခြားများ ချန်ထားခဲ့သော သဲလွန်စများ | စတိုင်လ်ကျသော အမျိုးသားများ
ဘာသာခြားများ ချန်ထားခဲ့သော သဲလွန်စများ
Alicia tomero | 27/05/2022 10:00 | စုံတွဲနှင့်လိင်
တစေ့တစောင်းနှင့် ညွှန်ပြသော တိုက်ဆိုင်မှုများစွာရှိကြောင်း တွေ့ရှိရခြင်းသည် စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စရာ၊ သင့်လက်တွဲဖော်သည် သစ္စာမဲ့သူဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် စိတ်ကူးယဉ်သက်သက်သာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ နောက်ထပ် ပေါ်လွင်ခြင်းမရှိသော တိုက်ဆိုင်မှုများအား ထောက်ပြပါ။ဒါပေမယ့် အများကြီးရှိနေပြီဆိုရင်တော့ အရာအားလုံးဟာ ဖောက်ပြန်မှုကို ညွှန်ပြနေပါတယ်။ ဆုံမယ်။ ဘာသာခြားတွေက ဘယ်လို သဲလွန်စတွေ ချန်ထားခဲ့သလဲ။ ဒီလိုမျိုး ကြုံလာတဲ့အခါ။
အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်မှုတွေ တိုးလာတယ်၊ စုံတွဲ အမျိုးအစား သို့မဟုတ် အိမ်ထောင်ရေး တစ်ခုခုကြားတွင် ဖြစ်စေ၊ အာရုံကြောဆိုင်ရာ အကြောင်းပြချက်များ၊ အပြုအမူဆိုင်ရာ ပြဿနာများ၊ မျိုးရိုးဗီဇ၊ ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ စသည်တို့ကြောင့်ဖြစ်စေ ဤအဖြစ်အပျက်များကို ဖော်ပြသည့်အချက်များသည် အလွန်ကွာခြားပါသည်။ ဤအချက်များထဲမှ တစ်ခုခုကို မှတ်သားရန်သာ ဖြစ်ပါသည်။ ဘာသာခြားတွေရဲ့ သဲလွန်စတွေက ဘာတွေလဲ။
1 လူမှုကွန်ရက်များသည် အဓိကအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။
2 အဆက်မပြတ် လိမ်ညာခြင်း။
4 ထူးဆန်းပြီး အချိန်အခါမဟုတ် ထွက်ခွာခြင်း။
5 အိမ်ပြန်ရောက်ရင် ရေချိုးတယ်။
6 စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ သင်ဟာ တခြားအရာတွေကို အမြဲတွေးနေတတ်ပါတယ်။
7 သူ့သူငယ်ချင်းတွေက တစ်ခုခုကို ဖုံးကွယ်ထားပုံရတယ်။
8 လိင်ဆက်ဆံရာမှာ ဘာတွေဖြစ်တတ်လဲ။
ဖောက်ပြန်မှုအများစုသည် အင်တာနက်မှ စတင်သည်။ အမည်မသိသူများနှင့် ပို၍ပို၍ အဆက်အသွယ်ရှိခြင်းနှင့် ထိုပရိုဖိုင်၏နောက်ကွယ်တွင် တစ်စုံတစ်ဦးမှ ခိုအောင်းနေသည့် လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှုကို ဖြေရှင်းပေးခြင်း၊ စူးစမ်းချင်စိတ်ကို တိုးပွားစေသည်။ထို့နောက် အဆက်အသွယ်ရပြီး နောက်ဆုံးတွင် ရက်စွဲတစ်ခု ရောက်လာသည်။
လူသစ်များနှင့် တွေ့ဆုံရခြင်းသည် များစွာသော ကျေးဇူးကြောင့် တစ်နေ့တာ၏ အစီအစဉ်ဖြစ်သည်။ အွန်လိုင်းတွင် ပရောပရည်လုပ်ရန် ဝဘ်ဆိုက်များနှင့် အက်ပ်များ။ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းသည် အများအားဖြင့် အဓိကနည်းလမ်းဖြစ်ပြီး သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သည် ၎င်းတို့၏ဝင်ရောက်ခွင့်ကို ဖုံးကွယ်ရန် သို့မဟုတ် ပိတ်ဆို့လေ့ရှိသောအခါတွင် ထိုသို့ဖြစ်နိုင်သည့်အကြောင်းရင်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်လာသည်။
၎င်းတို့သည် ယခင်က ဖုန်းအသုံးပြုပုံနှင့်ပတ်သက်၍ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရမည့် သဘောထားများသည် ၎င်းတို့ဖြစ်နိုင်သည်ကို သဲလွန်စပေးမည်ဖြစ်သည်။ အခြားလူများနှင့် ပရောပရည်လုပ်ခြင်း။. အကြောင်းကြားချက်များကို အမြဲသတိထားနေမည်ဖြစ်သောကြောင့် ဤစက်ပစ္စည်းကို ဆက်လက်အသုံးပြုခြင်းသည် စကားပြောစရာများစွာကို ပေးပါလိမ့်မည်။ အမြဲပင် သင်၏ဝင်ရောက်ခွင့်အပေါ် လုံး၀ ထိန်းချုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အခြားလူများထံ ဆက်သွယ်ရန် သို့မဟုတ် ၎င်း၏အကြောင်းအရာကို မဖတ်နိုင်စေရန်။
ကြီးကြပ်မှု၊ ကြီးကြပ်မှု သို့မဟုတ် ဆင်ခြေပေးသည့်အချက်သည် ဆီလျော်မှုမရှိသော ကိစ္စများဖြစ်နိုင်သည်။ အဖြစ်မှန်က ဒီအဖြစ်အပျက်တွေ ဆက်တိုက်ဖြစ်သွားတယ်။ ၎င်းတို့သည် အလွန်အဆက်မပြတ်ဖြစ်ပြီး သင်သည် အစက်များကို ချိတ်ဆက်ရန် စတင်သည်။ အကြိမ်များစွာ ထပ်မပေါင်းမိကြောင်း သင်သတိပြုမိပါသည်။
သငျသညျ may ဆွေးနွေးပွဲများ စတင်ကြပါစို့ တစ်ဖက်လူက အဖြစ်မှန်တွေကို ငြင်းဆိုပြီး လက်တွဲဖော်ကို အလွန်ထိန်းချုပ်မှု၊ ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ပြီး အလွန်မနာလိုဖြစ်မှုတွေကြောင့် အပြစ်တင်ပါတယ်။ သစ္စာဖောက်တဲ့သူကို ဖမ်းမိတဲ့အခါ ယေဘူယျအားဖြင့် တုံ့ပြန်မှုဟာ အမြဲသတိရှိရမယ့်၊ ဒေါသကြီးပြီး ဒေါသအရမ်းထွက်လိမ့်မယ်။
အဲဒါဖြစ်ပျက် မမျှော်လင့်ထားတဲ့ အပြောင်းအလဲနဲ့ ရုပ်ပုံပြောင်းခြင်း၊ ဆံပင်ကို ပိုသပ်ရပ်စွာ ၀တ်ဆင်ထားပြီး အရင်က အသုံးမပြုတဲ့ ရေမွှေးကိုတောင် တစ်ခုခုဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့ သဲလွန်စလေးတွေကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။
ကြုံနေရလို့ နည်းနည်း အပြောင်းအလဲ ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။ ဖြစ်တည်မှုအကျပ်အတည်းကို အပြောင်းအလဲလုပ်ပြီး သူ့ကိုယ်သူ ပြန်လည်ဆန်းသစ်လိုသည်။ ဒီအဖြစ်အပျက်တွေ တိုက်ဆိုင်နေချိန်နဲ့ သူချိန်းတွေ့ခဲ့တာဖြစ်နိုင်လို့ နေ့ခင်းဘက်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကို သတိပြုကြည့်ပါ။
ထူးဆန်းပြီး အချိန်အခါမဟုတ် ထွက်ခွာခြင်း။
အဆင်မပြေသော ထွက်ပေါက်များ ကြီးစွာသော ဆင်ခြေဖြင့် လူတို့ကို အမြဲပြောတတ်၏။ ပုံမှန်မဟုတ်တော့တဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ ဆက်တိုက်ဖြစ်လာတဲ့အခါ၊ ဒါက မေးခွန်းထုတ်စရာတွေ ဖြစ်နေပါပြီ။ သင်၏ မမျှော်လင့်ထားသော ထွက်ခွာမှု သူတို့မှာ အမြဲတမ်း ဆင်ခြေရှိတယ်။အရေးကြီးတဲ့ အရာတစ်ခုကို ကောက်ယူဖို့၊ အလုပ်တစ်ခုလုပ်ဖို့နဲ့ သိပ်ပြီး မရေရာတဲ့ အဖြေတွေ အမြဲထွက်လာတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
နောက်ပြီး ဒီကိစ္စကို နက်နက်နဲနဲ သိချင်တဲ့အခါ ခုခံကာကွယ်မှုရရှိလာသည်။ ငါဘာမှ မလုပ်နိုင်တော့ဘူးလို့ ပြောတယ်။ ငါ အပြင်မထွက်နိုင်ဘူးလား? ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ မင်းဒီလိုပြောဖို့ အခွင့်အရေးယူနိုင်တယ်။ အနီးနား တစ်နေရာရာမှာ တစ်ခုခုလုပ်ဖို့ သူ့ကို လိုက်သွားမယ်။၎င်းသည် မည်သို့တုံ့ပြန်သည်ကို ဤနေရာတွင် သင်တွေ့ရပါမည်။ သူ ရှုပ်ပွနေလျှင် သို့မဟုတ် ရှုပ်ပွနေပါက၊ သူသည် သင်မသိစေလိုသော အရာတစ်ခုခုကို ပြုလုပ်တော့မည်ဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။
ဒါဟာ အလွန်အဖြစ်များတဲ့အရာတစ်ခုပါ။ ချစ်သူနှင့်ချိန်းတွေ့ရာမှ ပြန်လာသောအခါ သစ္စာမဲ့သူများစွာ သဲလွန်စတွေကို ဖျောက်ဖျက်ဖို့ ရေချိုးဖို့ ကြိုးစားကြတယ်။ အဲဒါက သူတို့ကို အပြစ်တင်လို့ရတယ်။ တစ်ခုခုကို တကယ်သံသယဖြစ်ရင် သူ့အဝတ်အစားတွေလိုမျိုး ကျန်နေနိုင်တဲ့ တခြားခြေရာတွေကို ရှာကြည့်ပါ။ အချို့သော ရေမွှေးနမူနာများနှင့် မထင်မှတ်ထားသော အစွန်းအထင်းလေးများပင် သင်တွေ့နိုင်သည်။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ သင်ဟာ တခြားအရာတွေကို အမြဲတွေးနေတတ်ပါတယ်။
ကောက်ချက်မချဘဲ နေခြင်းက ပိုကောင်းပါတယ်။ သူ့ခေါင်းထဲမှာ တစ်ခုခုရှိနေတယ်။ ဒါမှ သူ့ခေါင်းကို တခြားနေရာမှာ ထားစေတယ်။ သူဘာတွေတွေးနေလဲဆိုတာကို မရှင်းပြဘဲ သင်သူ့ကိုတကယ်ကြည့်နေသလိုမျိုး ဖြစ်နေရင် ဒါက ကောင်းတဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ပါဘူး။ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်တဲ့ အတွေးမျိုးနဲ့ ပျောက်သွားတယ်။
သူ့သူငယ်ချင်းတွေက တစ်ခုခုကို ဖုံးကွယ်ထားပုံရတယ်။
အဖွဲ့ထဲမှာနေတဲ့အခါ ထိုတုန်ခါမှုမျိုး မရှိတော့ပါ။. တခါတရံ အခြေအနေတွေ တင်းမာလာပြီး သံသယဖြစ်စရာကောင်းတဲ့ တိတ်ဆိတ်မှုတွေကို ဖန်တီးပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုအချိန်တွင် သင်ရှိနေနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေပါတယ်။ ဤအခြေအနေမျိုးတွင် မည်သည့်အရာမှ မလုပ်နိုင်ပါ၊ သင်သည် မြင်ကွင်းတစ်ခုကို ဖန်တီး၍ ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်မှု ဖြစ်လာနိုင်သည်၊ သို့သော် သင်သည် ဘာမှမဖြစ်သကဲ့သို့ ပြုမူနေထိုင်ရပေမည်။
ဒီအချိန်မှာ မတူညီတဲ့ သီအိုရီနှစ်ခု ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ အပြုအမူတွေက အများအားဖြင့် ကွဲလွဲနေပေမယ့် အဖြစ်အများဆုံးကတော့ အဲဒါပါပဲ။ လိင်ဆက်ဆံမှု အကြိမ်ရေ လျော့နည်းလာသည်။. အခြားလူများသည် လိင်မှုလျော့နည်းသွားသည်ဟု ခံစားရုံသာမက ကြီးထွားလာပုံကိုလည်း ခံစားကြရသည်။ ဘာဖြစ်နိုင်သလဲ? လူတစ်ဦးတွင် ယခင်ကမရှိခဲ့သော စိုးရိမ်မှုများနှင့် အကြိုက်များရှိပြီး တိုးလာကြောင်း ပြသနိုင်သည်။ လိင်စိတ် သို့မဟုတ် သိသိသာသာ ကျဆင်းခြင်း။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » fit » စုံတွဲနှင့်လိင် » ဘာသာခြားများ ချန်ထားခဲ့သော သဲလွန်စများ
အရေပြားကို ကြွက်သားနဲ့ ကပ်နည်း
ယောက်ျားက မင်းကို မချစ်တဲ့အခါ သူဘယ်လို အပြုအမူလဲ။